Zvikanganiso zvinokuvadza yako brand brand pasocial network | ECommerce nhau
Claudi casals | | eCommerce, evanhu vezvenhau
Ichi chinyorwa chingave chimwe chezvakakosha uye zvakakosha zvine chekuita nekuziva maitiro ekuita. Iwe unozoona kuti pakupedzisira, mhando yemifananidzo zvikanganiso zvakabatana zvakanyanya nekusada kuzviita. Kuona kwedu pachedu kwakabatana zvakanyanya nemaonero atinoita nawo zvinhu. Ndipo ipapo nemweya wekufarira uye kusaita chakaipa, isu tinogona kutogadzira zvinopesana. Zvakanaka, ndezvevanhu, uye iwe pamwe unozviona uchiratidza mavari. Izvo zvakaringana kunzwira hushoma neruzhinji rwaunoda kutarisa kuti unzwisise zvavanotarisira kana iwe uchikuona, kana pane kudaro, ivo vanotarisira kubva kune yako brand.
Neichi chikonzero, ini ndiri kuenda kuzokuratidza runyorwa pamwe rwunowanzoitika uye nyore kururamisa zvikanganiso. Mukupedzisira, iwe pachako uchakwanisa kuona kuti kuve iwe pachako, uye kunzwisisa zvauri kutsvaga kune vamwe, zvakare zvinoita kuti iwe uzive maitiro ekugadzirisa. Uye zvechokwadi, tsika inogadzira tsika, saka kana zvichikunetsa, usazvidya moyo. Ziva izvi zvakajairika zvikanganiso kana kuraira, mukufamba kwenguva zvichakonzera kuti iwe uzviite zvirinani.
1 Usatsvage kufudza yako ego
2 Usasanganise iye wega nehunyanzvi
3 Usateedzera chero munhu
4 Shambadzira zvemukati pazvinokodzera iwe
5 Ramba uine ziso pahunhu, pamusoro pehuwandu
6 Ziva vateveri vako uye zvinangwa zvako
7 Zvishoma kana zvisina kana rekodhi
8 Tenga vateveri kuti uwedzere vateereri vako
9 Usapindure kune zvakataurwa
10 Kwete kupedzisa nhoroondo yako
Usatsvage kufudza yako ego
Ndinotanga neyiyi nekuti yakajairika. Uye ndezvekuti isu tese tine chido chekuvada, uye kudiwa. Usazvirambe, hapana chinoitika, icho chakakosha chinhu. Asi dambudziko rinowanzo kuuya, mukuyedza kurida. Isu hatizvizive, uye chaizvo imomo nekuchengeta mundangariro nguva dzese "Ini ndinofanira kuda, ndinofanira kuda, ndinofanira kuda ..." sechiuno, tinowedzera icho icho.
Aya ndiwo mamwe matipi anowanzoitika:
Iwe unoregeredza iyo mhando yechiratidzo apo funga (kunyangwe kana usingazive) kuti iwo mufananidzo ndiwe. Uye kwete, haufanire kuzviratidza wega, asi izvo izvo vatengi vako zvavanofanirwa kutarisira kubva kwauri. Zvinogona kunzwa zvakanaka kuratidza pfungwa dzako kana zvirevo, asi urikugadzira kukosha mune chako chigadzirwa?
Iwe unoda kutaridzika zvakanaka nemunhu wese, uye neimwe nzira, iwe unotya kuzvimisikidza munzira imwechete. Iwe haudi kukuvadza chero munhu kana kuita kuti vanzwe kushomeka. Uye ini ndinonzwisisa kuti zvakajairika, asi dzimwe nguva, hazvikuvadze kutaura zvinhu kuyedza kuve wakanaka nemunhu wese zvinogara zvakapusa maitiro pakupedzisira (onai ndangozviita).
Uye haufanirwe kunge uchibata kumeso uye kurumbidza vateereri. Pane kudaro, kurerutsa uyo waunofunga semuvengi wako kana kukwikwidza kwako. Zvinogona kutsamwisa, uye zvakashata kwazvo.
Usasanganise iye wega nehunyanzvi
Kutsanangura mutsetse pakati pehupenyu nehunyanzvi dzimwe nguva zvinoita kunge kusanzwisisika, asi pane zviripachena misoro. Kune rimwe divi, rako reBrand rinofanira kutenderera pane zvaunoita, asi kwete kurisanganisa nehupenyu hwako kunze kwaro. Sezvinei, hapana zvinyorwa pa "vidorra que te pegas" kana "yekupedzisira bhengi revhiki."
Muchiitiko chekuti iwe unofunga kuti vanhu vazhinji vanokutevera, uye nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, zvinouya semhepo yehukuru kana kukurudzira, kana. Rangarira kuti vanhu vaifarira chiratidzo chako, uye kuti kuchichinja hakuzoshandure zvavanotarisira. Isa chokwadi kumashure zvakanyanya, uye haufarire kamwe kamwe kutsvaga izvo zvisiri izvo zvauri kutsvaga.
Kana iwe uri mumwe wevaya vanoisa zvemunhu zvinhu saka kwete, rega kuzviita. Zvichava zvakanakisa.
Usateedzera chero munhu
Hapana chekutevedzera chechitatu mapato, waunofunga nezveako mareferenzi, uye mashoma kopi uye unama. Chikonzero chiri pachena chaungave uchikwanisa kuona ndechekuti mumwe munhu anenge akubaya. Asi kwete, kunyange zvingave nemhedzisiro iyoyo, ini handisi kuenda ikoko.
Ngatifungei kuti mukufamba kwenguva, iwe une vateveri, vasingacherechedze hunyengeri hwako. Zvese zviri kufamba mushe, asi… Ko kana iwe uchifanira kupindura mumwe munhu? Iwe unofanirwa kutumira kana kuita chimwe chinhu zvakanyanya kana zvishoma nekukurumidza? Hazvirevi kuti iwe hauna kwaunotendeukira, asi kuti iro zuva rinouya apo vanhu vanotanga kuongorora kuti chiratidzo chavo (iwe kwauri), hachisisiri ivo. Vashandisi vanowira murudo zviri nyore, uye nekuonekana.
Saka kukosha kwekuve iwe pachako. Iwe unotenda iwe pachako here Iwe unoziva here kuti icho iwe chaunopa chakakosha? Ipapo usatya. Zviite nenzira yako, nguva ichaigadzirisa, uye pasina kunyepedzera, iwe unowana mhedzisiro iri nani.
Shambadzira zvemukati pazvinokodzera iwe
Kwete! Uye ndinotaura zvine simba. Tarisa pane zviverengero, uye kana usina, fungidzira maawa ayo vanhu vazhinji vachakwanisa kubatanidza kune webhusaiti yako. Asi hapana kana munhu anobhurawuza Facebook kana mamwe masocial network pane dzimwe nguva senge 3 mangwanani.
Kana iri nguva yacho kuti zvave zvakanaka kuti iwe uve nechimwe chinhu chekuburitsa zvakanaka, zvakaisvonaka. Asi purogiramu inotumirwa pane imwe nguva yakanaka. Sa11 mangwanani, semuenzaniso.
Ramba uine ziso pahunhu, pamusoro pehuwandu
Ndakaona izvi mumakambani mazhinji, ese ari maviri aishanda uye achinge ndazviona. Iko kumhanyisa kuwana mhedzisiro, kushushikana, uye kuyera kuti yakawanda sei yakaitwa ... Zvakanaka, hazvishande kazhinji hapana hunhu mariri. Ndinokupa muenzaniso:
Ungada here iwe, semuenzaniso, kuverenga blog iyo inoburitsa iyo 300-izwi post zuva rega rega? Ndekupi, mukuwedzera, ivo vanotsanangudza zvishoma kwauri, zvisina kukwana, uye nekunzwa kuti zvakanyorwa zvizere? Kana iwe ungasarudza zvinopesana? A blog iyo inogona kutsikisa kamwe pasvondo, nemunhu anogona kunge asina nguva yakawanda, asi anodyara 1.500-izwi posvo nezvose zvakanyatsotsanangurwa, zvakatsanangurwa… uyai, mhando yakanaka. Unosarudza chii?
Iwe unofanirwa kuzviedza iwe pachako. Kana iwe uine nguva, zvakanaka, uye kana zvisiri, kuti utore zvemukati zvako. Napoleon akati ... "Ndipfeke zvishoma, ndiri kuchimbidza."
Ziva vateveri vako uye zvinangwa zvako
Ndeupi rudzi rwevanhu iwe hwaunoda kunongedza? Tsanangura vateereri vako nekutsanangudza zvinangwa zvako. Kana iwe usingavazive, uri kugumburwa. Kusazvitsanangura pachako hakuite kuti iwe ubude mune chimwe chinhu chakatarwa.
Ini pachangu chaive chinhu chandaive nenguva yakaoma kunzwisisa, pamwe ndosaka ndichisimbisa. Yakanga isiri iyo kusvika pandakaona blog yaindifarira kamwechete ini yandakanzwisisa. Iye mukomana akaipfeka haatomboburitsa chero chinhu (zvinoenderana nepfungwa yapfuura yandakakuudza). Nekudaro, zvese zvaakatumira zvaityisa. Zvese zvaive zvakanyatsotsanangurwa, zvakapamhama, zvaishandisa mashoma mifananidzo asi zvakanyanyisa, uye muchidimbu ... zvinofadza kuverenga zvirimo zvakanyatso kufumurwa. Chikamu chako? Iyo yakatsanangurwa chaizvo chimiro chevanhu. Nekudaro, ini ndinounganidza kuti handisini ndoga ndaionazve webhusaiti yako kakawanda. Iko parizvino yakanyatsogadzika, uye mushure memakore aya, inozivikanwa zvakanyanya.
Zvishoma kana zvisina kana rekodhi
Hapana chakavakwa nehusiku, sekuda kwaunofanira kuedza kuve wenguva dzose. Usarega saiti yako ichifa. Zvakare zvinoenderana nezvandakambotaura kare. Usatumira zuva rega rega kana usingakwanise, asi hongu, ita nguva yekupa zvirimo zvitsva kamwechete pasvondo. Izvo zvakakosha kuti kupona kweako wega Brand uye kuti haina kuwira mukukanganwa.
Tenga vateveri kuti uwedzere vateereri vako
Izvo zvinokwanisika kuti mumweya wekuwedzera vateereri vako iwe unofunga mukana wekutenga vateveri. Uye zvakare, inzira yakajairika yekutarisa rako basa zvichibva nekuwedzera kwevateveri vawave navo. Asi iwe unozviona sechakanaka here? Kunyangwe kana izvo zvichireva kuve nezviuru zvevateveri uye kuti kana iwe ukashambadzira zvemukati dzimwe nguva hautombowana zvakafanana? Kwete, haina hutano, kana iwe kana homwe yako.
Iko kusazvibata kwaunoita kune yako yega brand, nekuti haugone kumutsa kufarira kune vanhu pakurova cheki cheki (zvave zvakanaka sei, asi ichokwadi). Mutsara wako, uye vateveri vanokoshesa zvaunoita vachatungamira vamwe kukutevera. Izvi ndizvo.
Usapindure kune zvakataurwa
Kupindura mibvunzo yevashandisi kunogamuchirwa semutsa, kutarisisa uye kunetsekana kune uyo anotarisira nzvimbo. Kunyangwe mushandisi makomendi aungave usingade kana kutaura chimwe chinhu chakaipa. Zvirinani kuti, kutanga kuvharira vashandisi.
Kazhinji, kuvhura tambo pachivande kuti utaure nemushandisi haisi yakaipa zano. Nekudaro, zvandinotaura hazvireve kuti isu tinofanirwa kutsungirira kutukwa kana vanhu vanozonyatsokuvadza netsika dzakaipa. Pakadai, hongu, zvakanakisa kufuratira vanhu ava, kana kusavapindura. Humbowo hunotaura pachahwo.
Kwete kupedzisa nhoroondo yako
Uye chekupedzisira, wink kune ese iwo ma profiles atinosvika uye haatiudze zvakawanda. Kwete kuti ndivanaani kana kuti ndivanaani, zvavanoita, kana kuti ivo varipi, uye hapana chinhu.
Tsaurira maminetsi gumi, hapana chikonzero chekunyora uye kuwedzeredza iyo saiti. Newe chete tsanangura zvishoma zvauri uye zvaunoita, pikicha kana logo yako pachayo, uye kuti ungakuwana sei, iri nani kwazvo kupfuura chimiro chisina ruzivo.
Ndinovimba kuti kukundikana uku kwese kunogona kuongororwa nekuzotarisirwa kubva ikozvino. Izvo hazvina kuoma kugadzirisa, chinhu chakaoma kuachengeta mundangariro uye kuva wenguva dzose mukusavaita. Asi sekutaura kwandamboita pakutanga kwechinyorwa, kumagumo, mushure mekudzokorora kakawanda, tsika uye hunhu hwakanaka zvinogadzirwa, kuitira kuti chiratidzo chako chive chinoramba chakasimba uye chisinga kukuvadzwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Zvikanganiso zvinokuvadza yako brand brand pasocial network